Kooxda Real Madrid oo guul muhiimi aheyd ka gaartay dhigooda Athletic Bilbao +Sawiro – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo guul muhiimi aheyd ka gaartay dhigooda Athletic Bilbao +Sawiro
( Spain) 21-Abriil 2019 kooxda Los Blancos ayaa 3-0 kaga adkaatay Kooxda Athletic Bilbao kulan ka tirsanaa horyaalka Dalka Spain ee La Liga.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Real Madrid iyo Athletic Bilbao ayaa ku hishiiyey bar-baro gool la’an ah wallow ciyaartoyda labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan.
Ciyaartoyda labada koox waxaa soo maray jaanisyo gool loo filan karay balse midne kama uusan faa’ideysan fursadahaas in ay gool u badalaan.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa lagu kala nastay bar-baro gool la’an ah, muddo kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Markii dib la isagu soo laabtay Kooxda Real Madrid ayaa durba heshay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey laacibka reer Farance ee Benzema kaddib caawin uu ka helay Asensio daqiiqadii 57-aad ee ciyaarta.
Athletic Bilbao ayaa marar badan gaartay shabaqa kooxda Los Blancos lkn waxa ay ku hungoobeen in ay helaan goolka bar-baraha ee ciyaarta.
Madriid ayaa mar kale heshay gool kale oo labaad waxaana mar labaad shabaqa gaaray Benzema oo dhaliyey kubad madax aheyd daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta.
Bale oo badal ku soo galay ciyaarta ayaa caawiye ka noqday gool yimid daqiiqadii 90-aad ee ciyaarta waxaana goolkii sedexaad ee Madriid dhaliyey Benzema oo caawa dhaliyey goolasha loo yaqaan sedex ley.
Ugu dambeen kulanka ayaa ku soo dhamaaday 3-0 oo ay guushu ku raacday Kooxda Real Madrid oo ku ciyaareysay garoonkeeda.
Manchester United oo guul daro xanuun badan kala kulantay Everton xili hamigoodii kaalmaha afarta sare uu god mugdi sii galay +Sawiro
Liverpool oo garaacday Cardiff City iyo Arsenal oo ku hor kuftay Crystal Palace +Sawiro